Ogaden News Agency (ONA) – Maxaa Laga Filan Karaa Abaabulka Ururka Dhalinyarada OYSU.
Maxaa Laga Filan Karaa Abaabulka Ururka Dhalinyarada OYSU.
Laga soo bilaabo shirweynihii 3 aad ee jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia ee Dalka Eritrea ku qabsoomay, waxaa isbadal xawaare ku socdo laga dareemayaa dhamaan dhalinyarada daafaha dunida ku nool ee utaagan garab istaaga halganka Somalida Ogadenia ee JWXO hormuudka u tahay.
Xili aan sii fogeyn waxaa gudaha dhulka Somalida Ogadenia safar dag dag ah ugu kicitimay xoghaya guud ee OYSU, waxaana safarka ku wahelinayay xubno sar sare ururka dhalinyarada North America.
Ururka dhalinyarada OYSU waxaa ku mideysan In ka badan 50 ururhoosaad kana howl galla dhamaan daafaha dunida.
Hadafka ururka dhalinyarada loo aasaasay wuxuu ahaa kobcinta iyo garaadka dhalinyarada Somalida ogadenia ee daafaha dunida ku nool Isla markaana lugu barbaariyo wadaniyada iyo himilada loogu jirro xoreynta dhulka somalida Ogadenia.
Hadaba ururka dhalinyarada OYSU qaarada Europe ayaa wuxuu shir uga socdaa magaalada Oslo ee wadanka Norway waxaana kaso qayb galay madaxda ururka dhalinyarada qaarada yurub iyo qaar kamida xubnaha OYSU.
Shirkan oo maanta furmay ayaa wuxuu qayb ka yahay abaabulka ay wadaan ururka dhalin yarada waxaana lasii laban laabi doonaa kaalintooda kaga aadan halganka.
Ugu danbayntii Abaabulkan ayaa waxaa laga filan karaa inuu wax wayn ka badali doono geesi socodka guud ahaan halganka Ogaadeniya gaar ahaana inay kaalin wayn ka ciyaari doonaan isbadalada ka socda dhulka soomaalida Ogaadeniya iyo guud ahaanba gumaysiga Itoobiya